परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: जीवनमा प्रवेश | अंश ५५३ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
तिमीहरूको बीचमा भइरहेको यो काम के काम गरिनुपर्छ भन्ने अनुसार नै तिमीहरूमा गरिएको हुनुपर्दछ। यी मानिसहरूलाई विजय गरेपछि, मानिसहरूको एउटा समूह सिद्ध हुनेछ। त्यसैले, अहिलेको धेरै काम तिमीहरूलाई सिद्ध बनाउने लक्ष्यको तयारीका लागि पनि हो, किनभने सिद्ध हुन सक्ने धेरै मानिसहरू सत्यको निम्ति भोकाइरहेका छन्। यदि विजयको काम तिमीहरूमा गरिन्छ र त्यसपछि थप काम केही पनि गरिँदैन भने, त्यसपछि के यो सत्यको खोजी गरिरहेको व्यक्तिले यसलाई प्राप्त गर्ने घटना बन्दैन? अहिलेको कामले पछि मानिसहरूलाई सिद्ध गर्ने बाटो खोल्ने लक्ष्य राख्दछ। यद्यपि मेरो काम भनेको विजयको काम मात्र हो, मैले भन्ने जीवनको बाटो मानिसहरूलाई सिद्ध गर्ने तयारीका लागि हो। विजयपछि आउने काम मानिसहरूलाई सिद्ध गर्ने काममा केन्द्रित हुन्छ, र जित्ने काम सिद्ध गर्ने कामको जग बिछ्याउनका लागि गरिन्छ। मानिस विजय प्राप्त गरेपछि मात्र सिद्ध हुन्छ। अहिले, मुख्य काम भनेको जित्नु हो; पछि, सत्य खोज्ने र त्यसको पछि लाग्नेहरू सिद्ध हुनेछन्। सिद्ध हुनुले मानिसहरूको प्रवेशको सक्रिय पक्षहरू समावेश गर्दछ: के तिमीहरूसँग परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने हृदय छ? तिमीहरूले यो बाटो हिँड्दै गर्दा तिमीहरूको अनुभवको गहिराइ के भएको छ? परमेश्‍वरप्रतिको तिमीहरूको प्रेम कत्तिको चोखो छ? तिमीहरूको सत्यको अभ्यास कत्तिको सही छ? सिद्ध हुनका लागि, कुनै व्यक्तिसँग मानवताको सबै पक्षहरूको आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ। यो एउटा आधार रेखा आवश्यकता हो। तिनीहरू सबै जो विजय गरेर पनि सिद्ध हुन सक्दैनन्, सेवा गर्ने पात्रहरू बन्छन् र अन्ततः अझै पनि आगो र गन्धकको कुण्डमा फ्याँकिन्छन् र अझै पनि अतल खाडलमा खस्नेछन्, किनभने तिमीहरूको स्वभाव परिवर्तन भएको छैन र तँ अझै पनि शैतानकै हुनुहुन्छ। यदि कुनै मानिसमा सिद्धताका लागि सर्तहरूको कमी छ भने, त्यो व्यक्ति बेकम्मा हो—ऊ फोहोर, एक औजार हो, जुनले आगोको परीक्षणको सामना गर्न सक्दैन! अहिले परमेश्‍वरप्रति तेरो प्रेम कत्तिको ठूलो छ? तेरो आफ्नो घृणा कत्तिको ठूलो छ? तैँले शैतानलाई वास्तवमा कत्तिको गहन रूपमा चिनेको छस्? के तेरो आफ्नो संकल्प बलियो छ? के तेरो मानवताभित्रको तेरो जीवन सहिसँग नियमन भएको छ? के तेरो जीवन बदलिएको छ? के तँ नयाँ जीवन बाँचिरहेको छस्? के तिमीहरूको जीवनको दृष्टिकोण बदलिएको छ? यदि यी कुराहरू परिवर्तन भएका छैनन् भने, तिमीहरू पछि नहटे पनि सिद्ध हुन सक्दैनौ; बरु, तँलाई विजय गरिएको मात्र छ। जब तँलाई परीक्षण गर्ने समय आउँछ, तँमा सत्यको अभाव हुनेछ, तेरो मानवता असामान्य हुनेछ, र तँ बोझको जनावर जत्तिकै निम्न हुनेछस्। तेरो एक मात्र प्राप्ति विजय गरिएको हुनु थियो—तँ मैले विजय गरेको केवल एक चीज हुन सक्छस्। जसरी गधा एक पटक मालिकको कुटाइको अनुभव गरेपछि, डराउँछ र मालिकलाई हरेक पटक देख्दा केही गर्न डराउँछ, तँ केवल विजय गरिएको गधा मात्र हुनेछस्। यदि कुनै व्यक्तिसँग ती सकारात्मक पक्षहरू छैनन् र त्यसको सट्टामा निष्क्रिय र डरलाग्दो, डरपोक र सबै कुरामा हिचकिचाहट, स्पष्ट रूपमा कुनै कुरा बुझ्न असमर्थ, सत्यलाई स्वीकार गर्न असमर्थ, अभ्यासको लागि कुनै मार्ग विनाको, र त्यो भन्दा पनि परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने हृदय विनाको हुन्छ—यदि एक व्यक्तिले परमेश्‍वरलाई कसरी प्रेम गर्ने, कसरी अर्थपूर्ण जीवन बिताउने वा कसरी वास्तविक व्यक्ति बन्ने भन्ने कुरा बुझेको छैन भने—त्यस्तो व्यक्तिले कसरी परमेश्‍वरको साक्षी दिन सक्छ? यसले तेरो जीवनको थोरै मूल्य छ र तँ विजय गरिएको गधा होस् भन्ने देखाउँछ। तँलाई जित्नेछ, तर यसको केवल अर्थ यो हो कि तैँले ठूलो रातो अजिङ्गर त्यागेर यसको अधिकार क्षेत्रमा आज्ञापालन गर्न अस्वीकार गर्यौ; यसको मतलब तँ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनेर विश्‍वास गर्छस्, परमेश्‍वरको सबै योजनाहरू पालना गर्न चाहन्छस्, र तँसँग कुनै गुनासो छैन भन्ने हुन्छ। तर सकारात्मक पक्षहरूका लागि, के तँ परमेश्‍वरको वचनमा जिउन र परमेश्‍वरलाई प्रकट गर्न सक्छस्; यदि तँमा यीमध्ये कुनै पनि पक्षहरू छैनन् भने, यसको अर्थ तँलाई परमेश्‍वरले हासिल गर्नुभएको छैन र तँ केवल विजय गरिएको गधा होस् भन्ने हुन्छ। तँमा केही कुरा इच्छित छैन र पवित्र आत्माले तँमा काम गरिरहनुभएको छैन। तँमा मानवताको पनि कमी छ; परमेश्‍वरले तँलाई प्रयोग गर्न असम्भव छ। तँलाई परमेश्‍वरले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ र तँ अविश्‍वासी जनावरहरू र हिँड्ने मृत मानिसहरू भन्दा सय गुणा राम्रो हुनुपर्दछ—यस स्तरमा पुग्ने व्यक्तिहरू मात्र सिद्ध हुन योग्य छन्। यदि कसैसँग मानवता छ र विवेक छ भने मात्र यो परमेश्‍वरको प्रयोगको लागि उपयुक्त व्यक्ति हो। तँ सिद्ध भएमा मात्र तँलाई मानवको रूपमा लिइन्छ। सिद्ध भएकाहरू मात्र अर्थपूर्ण जीवन बाँच्ने मानिसहरू हुन्। त्यस्ता मानिसहरूले मात्र परमेश्‍वर सामु अझ ठूलो स्वरले साक्षी दिन सक्छन्।